MaConnection Anoshanda Sei kune Ruzha Bhawa?
ne admin pane 20-06-11
Paunenge uchisarudza bhaa rezwi, ita shuwa kuti iwe unotora imwe neakakodzera kubatana kweTV yako nezvimwe zvinhu. Pane nzira mbiri dzekutanga dzekukochekera bhaa rezwi kune yako system. Nzira yakajairika ndeyekushandisa yako TV seyeti yekuchinja: unobatanidza yako Blu-ray player, cable o ...
Unonzwika Mabhawa Anoshanda Kune Mumhanzi?
Nekufarirwa kwemitambo yemumhanzi isina waya, hazvishamise kuti mazhinji mabara enzwi zvino anopa iwo kugona. Yakavakirwa-muBluetooth® inoita kuti ubudise mimhanzi zviri nyore kubva kune yako smartphone, piritsi, kana komputa inokwanisa yeBluetooth. Inoshanda nemumhanzi wakachengetwa pafoni yako ...
Stereo kana Yakakomberedza Ruzha?
Izvo zvakakodzera kudzokorora kuti chero bharanzi bhaisikopo ichanzwika nenzira iri nani pane yako TV. Basic ruzha mabara anowanzo kuve stereo dhizaini iyo inoburitsa imwecheteyo kurudyi uye kuruboshwe chiteshi odhiyo odhiyo seTV yako. Asi zvinonzwika zvakanyanya kukura nekutenda kumatauri akakura anofambiswa ne ampl ...
Inzwi Bar kana Ruzha Base?
Parizvino, isu tanga tichitaura nezve mabara enzwi ayo ane hurefu, mutete chimiro chebhawa. Asi pane imwe mhando: chikuva-chimiro ruzha bhaa, zvakare dzimwe nguva inonzi inonzwika base. Iyi yakafara, yakaderera-chimiro dhizaini inogara pasi peTV yako uye inoitsigira. Ruzha mabhesi ane ...
Ko Zvakadii neiyo Subwoofer yeYangu Inzwi Bhawa?
Kana iwe uchifunga kuti ungangoda bha ruzha ine inoperekedza subwoofer, izvo zvinogona kudzikamisa ako ekuisa sarudzo zvishoma, asi pamwe zvishoma pane zvaungatarisira. Imhaka yekuti dzinenge dzese idzi subwoofers haina waya. Ndokunge, ivo vanogamuchira iyo odhiyo chiratidzo isina waya kubva ...
Ndekupi Kwauri Kuronga Kuisa Yako Inzwi Bar?
Kuziva kwauchazoisa yako bha bhagi kuchakurumidza kurerutsa sarudzo yako uye kudzikisira sarudzo dzako. Pane zvinhu zviviri zvekutanga. Kana TV yako yakarembera pamadziro iwe unogona kukwirisa bharanzi pazasi payo kuti uve nehutsanana, husina mutsindo. Kana iwe uri kuenda ...
Nei Ndichida Bhawa Rakanaka?
Mabhodhi eruzha akaputika mukuzivikanwa mumakore achangopfuura, uye huwandu hwemamodeli hwakaputika saizvozvo. Saka isu taisa pamwechete ino gwaro rekutenga kuti ikubatsire nekukurumidza kuti uone kuti kunhuhwirira kwebhawa ripi kungashanda zvakanyanya kwauri. Bhawa rine ruzha ndeye ese-mu-mumwe mutauri system th ...
Chii chinonzi Ruzha Bhawa?
Mabhodhi eruzha ane hupo hwavo kune flat-mapaneru TVs ... zvishoma kusvika pamwero wakati. Chokwadi, iwo akacheka makanda akaburitsa yakajeka-pikicha. Asi madiki avo, akavakirwa-mukati mutauri haagone kana kuburitsa nhaurirano zvakajeka, ndoda kuunza kuputika kunogutsa, tsaona dzemotokari uye zvese ...
Wifi Soundbar Vatauri, Sravana Sameeralu Serial 4th Tv Soundbars, Wifi Soundbar YeTv, Tv And Soundbar Gomo, Alexa Soundbar, Karaoke Soundbar,